Eudoxie Yao ayaa shaaca ka qaaday halyeeyga kubada cagta reer Ivory Coast Didier Drogba. - KU SAMEEYAAN NATIIJADA
Eudoxie Yao ayaa shaaca ka qaaday halyeeyga kubada cagta reer Ivory Coast Didier Drogba.
By bryanekobe On Juun 23, 2020
Ninka Afrikaanka ah Kim Kardashian wuxuu martida u ahaa barnaamijka Peopl'Emik ee laga sii daayay La 3 isagoo kooxda fanaanka u ah Yves Aymard Talaadada Juun 23, 2020. Eudoxie Yao wuxuu ku sugan yahay kulankiisa Christ Brown laakiin wuxuu shaaca ka qaaday halyeeyga kubada cagta Ivory Coast. oo ah Didier Drogba.
“Waxaan ku hayaa CAP-da suuxinta. Aniguba waxaan ahay xirfadle masseuse. Si fiican ayaan u duugista Dhowr sano ka hor markii Christ Brown iyo Rihana ay yimaadeen Cote d'Ivoire, waxaa ila soo xiriiray shaqaalaha Christ Brown si aan u duceeyo. Markii aan imid qolka hudheelka, Rihanna ayaa albaab ii furay. Didier DROGBA sidoo kale wuxuu ku sugnaa hoolka hoteelka. Waxaa wax laga xumaado ah, markaan arkay Christ Brown, waxay ii ahayd sidii inaan arkay lamda qof, sida dadka kale oo dhami. Laakiin isla markii aan arkay DROGBA, aad ayaan ugu faraxsanahay in qalbigeygu ku dhowaaday inuu quusto ”.
Waqtigaan, gabadha leh qaloocyo deeqsinimo leh, waxay ka hadleysaa kaliya iyada shabakadaha bulshada.
Maqaalkani wuxuu ugu horeyn u muuqday: https://afriqueshowbiz.com/cote-divoire-eudoxie-yao-fait-une-revelation-sur-didier-drogba/
fanaanka caanka ah Chris Brown wuxuu ugu yeeray Eudoxie Yao duugis
Ergayga Ernest Obama: "Amougou Belinga waa inuu noqdaa mid arxan daran oo naxariis daran"